‘बिपी कोइरालासँगको विवादले काँग्रेस परित्याग गरेँ’ (भिडियोसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
उड्दा उड्दैको हेलिकोप्टरबाट सामग्री झर्‍यो, त्रासमा स्थानीय
‘बिपी कोइरालासँगको विवादले काँग्रेस परित्याग गरेँ’ (भिडियोसहित)
नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'को फरक पाटो-२
access_time२०७६ साल भाद्र २५ गते, बुधबार ०३:३८ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​ भिडियो जीवनशैली
काठमाडौं । नागरिकखबरको फरक पाटोमा हामीले यस पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'का विषयमा सामग्री तयार गरेका छौँ ।
नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले जीवनका विभिन्न आरोहअवरोहका विषयमा आफैँले जानकारी दिएका छन् । उनको बाल्यकाल र स्कुल जीवनका विषयमा हामीले फरक पाटो-१ मा चर्चा गर्‍यौं ।
फरक पाटो-२ मा हामीले काठमाडौंमा श्रेष्ठले भोगेका अप्ठ्यारा अवस्था, शिक्षक र पत्रकारिताका विभिन्न पक्षमा चर्चा गर्छौँ ।
अध्ययनका क्रममा आर्थिक अभाव थियो । त्यसैले ट्युसन पनि पढाएँ । तर, त्यसले पनि नपुगेर कति दिन त भोकै बसेको छु ।
हामी नरदेवी बस्थ्यौँ । नजिकै भोला शिवाकोटी भन्ने मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । म भोलाजीको घरमा जान्थें । उहाँले खाना खानुभयो भन्नुहुन्थ्यो । मैले खाएर आएको भन्थें । कहिले काहीँ खाना खाएको छैन, क्षेत्रपाटीमा गएर होटलमा खान्छु भन्थें । खाना खानका लागि पैसा थिएन । खानदेउ भन्न पनि सक्दिन थिएँ ।
लामो समयसम्म यस्तो समस्या भयो । कहिले काहीं साथीलाई देखाउनकै लागि भए पनि होटलमा जान्थें । तर, पैसा नभएकाले नखाइ फर्किन्थें । त्यो बेलापैसा नभएकाले बाध्यतामा धेरै झुट बोलेको छु । म होटलबाट छिटो फर्किएको देखेपछि भोलाजीले कति छिटो खाना खाएको भन्नुहुन्थ्यो ।
काठमाडौंमा जीवन धान्नका लागि ट्युसन पढाउँथें । कालधारामा एउटा कर्णेलको घरमा बालबालिकाहरु पढाउन जान्थें । घरघरमा पुगेर पढाउने कामले जीवन धान्न सहयोग गरेको थियो । त्यसबापत महिनाको ६० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो ।
अध्ययनका क्रममा आर्थिक अभाव थियो । त्यसैले ट्युसन पनि पढाएँ । तर, त्यसले पनि नपुगेर कति दिन त भोकै बसेको छु । हामी नरदेवी बस्थ्यौँ । नजिकै भोला शिवाकोटी भन्ने मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । म भोलाजीको घरमा जान्थें । उहाँले खाना खानुभयो भन्नुहुन्थ्यो । मैले खाएर आएको भन्थें । कहिले काहीँ खाना खाएको छैन, क्षेत्रपाटीमा गएर होटलमा खान्छु भन्थें । खाना खानका लागि पैसा थिएन । खानदेउ भन्न पनि सक्दिन थिएँ ।
यसपछि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन र पार्टीलाई समेत सहयोग गर्न काठमाडौंको सिद्धार्थ वनस्थली हाइस्कुलमा पढाउन थालें । यो काममा कामरेड निर्मल लामाको जोड थियो । अध्ययन र राजनीति दुवैलाई फाइदा हुने भएपछि मैले सिद्धार्थ वनस्थलीमा पढाउन थालें ।
पहिलो वर्ष नै गिरफ्तार
क्याम्पस भर्ना भएको केही समयपछि नै म विद्यार्थी नेताको रुपमा स्थापित भैसकेको थिएँ । पहिलो वर्षमै गिरफ्तार परें । त्यो बेला म १६ वर्षको थिएँ । गिरफ्तारपछि मलाई सरकारले सेन्ट्रल जेलमा राखियो ।
हामीले त्यसबेला बिपी कोइरालाको पक्षमा पर्चा बनाउने र छर्ने काम गर्थ्यौं । महाराजगञ्ज क्याम्पसमा पनि विधार्थी हड्तालको नेतृत्व गर्‍यौं । यहीं कारण प्रशासनले मसहित केही साथीहरु बसेको होस्टल राति घेरेर पक्राउ गर्‍यो ।
त्यो बेलाको शान्ति सुरक्षा कानुनअनुसार हामीलाई केन्द्रीय कारागार लगिएको थियो । उक्त घटनापछि म विद्यार्थी कम र राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न हुन थालें ।
प्रशासनको गिरफ्तारीमा परेपछि मेरो ध्यान राजनीतिमा सोझियो । तर पनि मैले राम्रो नम्बर ल्याएरै उत्तीर्ण थिएँ । यस तह पास गरेपछि म एमबिबिएस पढ्न पाउँथे । तर, मेरो ध्यान त्यसतर्फ लागेन ।
क्याम्पस भर्ना भएको केही समयपछि नै म विद्यार्थी नेताको रुपमा स्थापित भैसकेको थिएँ । पहिलो वर्षमै गिरफ्तार परें । त्यो बेला म १६ वर्षको थिएँ । गिरफ्तारपछि मलाई सेन्ट्रल जेलमा राखियो ।
अध्ययन आफ्ना लागि र जीवन राजनीति तथा देश र जनताका लागि भन्ने विचार आयो । यद्यपि, मैले प्राइभेट रुपमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिएँ । जनप्रशासन र अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेँ । त्यसपछि मैले जनप्रशासनमै स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेँ ।
त्यो समय बिपी कोइराला भर्खरै भारत प्रवासबाट स्वदेश फर्किनुभएको थियो । बिपी कोइराला स्वदेश फर्किंदा हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागतका लागि गएका थियौँ ।
जनप्रशासन क्याम्पसमा स्ववियु सभापति
मेरो राजनीतिक जीवन स्कुलबाटै शुरु भएको थियो । अर्थात् १४ वर्षको उमेरमै म राजनीतिमा होमिएको थिएँ । त्यो बेलादेखि नै निरकुंशतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा म संलग्न भैसकेको थिएँ ।
होस्टलबाट गिरफ्तारपछि भने म राजनीतिमा बढी सक्रिय भएँ । तर, पढाइ निरन्तर थियो । स्नातक प्रभाइभेटबाट पूरा गरेपछि भने जनप्रशासन क्याम्पसको विद्यार्थी भएँ । त्यो समय म अत्यधिक बहुमतले स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएँ ।
“तरुण”को प्रभावले कांग्रेस भएँ
म सानैदेखि राजनीतिकरुपमा सचेत थिएँ । यसको पछाडि भने एकजना शिक्षकले ल्याउने तरुण पत्रिकाको योगदान छ । म त्यो पत्रिका स्कुलमा नियमित पढ्थें । त्यसले मलाई राजनीतिप्रति सचेत बनाएको थियो ।
तरुण पत्रिकामा बिपी कोइरालाको अपील हुन्थ्यो । त्यसले मलाई प्रभावित गरेको थियो । जसका कारण नै म राजनीतिमा संगठितरुपमा लागेको थिएँ ।
नेपाली कांग्रेस र उसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा आवद्ध भएँ ।
जेलमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापासँग भेट
२०३३ सालमा पहिलो पटक गिरफ्तार हुँदा म नेविसंघ आवद्ध थिएँ । नेविसंघको नेताको रुपमै म केन्द्रीय कारागारमा गएको हुँ । त्यहीँबेला मेरो भेट क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापासँग भयो ।
उहाँ ओखलढुंगा काण्डका नायक हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले ओखलढुंगाबाट सशस्त्र विद्रोहबाटै सरकारी संरचना कब्जा गर्ने र अगाडि बढ्ने रणनीतिअनुसार क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई पठाएको थियो । उक्त काण्डमा राम लक्ष्मणजस्ता थुप्रै योद्धाहरु मारिएका थिए ।
क्याप्टेन थापालाई सरकारले गिरफ्तार गर्‍यो । त्यसपछि उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो ।
२०३३ सालमा पहिलो पटक गिरफ्तार हुँदा म नेविसंघ आवद्ध थिएँ । नेविसंघको नेताको रुपमै म केन्द्रीय कारागारमा गएको हुँ । त्यहीँबेलामा मेरो भेट क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापासँग भयो ।
गोलघर भनेको त्यस्तो जेल, जहाँ एक जना पल्टिन मात्र ठाउँ पुग्थ्यो । त्यस्तो ठाउँमा उहाँलाई ताल्चा लगाएर राखिएको थियो । जेलमा हामीलाई देखेपछि उहाँले हँसिलो अनुहारसहित ‘नेपालमा अब प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ’ भन्नुभएको थियो ।
बिपी कोइराला बिरामी भएपछि राजा वीरेन्द्रले उपचार गर्न अमेरिका पठाए । त्यही समय क्याप्टेन थापालाई सरकारले मृत्युदण्ड दियो । एक जनालाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने र अर्कालाई जेलमै रहेका बेला मृत्युदण्ड दिने घटनाले मलाई बेचैन बनाएको थियो ।
बिपी अमेरिकाबाट फर्किएपछि एक दिन म साथीहरुसँग उहाँलाई भेट्न गयौं । उहाँ चाबहिलस्थित तारणीप्रसाद कोइरालाको घरमा बस्नु हुन्थ्यो ।
भेटका बेला मैले बिपीलाई प्रश्न गरेँ, ‘तपाईलाई राजाले उपचारका लागि अमेरिका पठाउने, यहाँ तपाईको होनाहार कार्यकर्ता एवं कमाण्डर क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई फाँसी दिने ? अझै तपाईले मेलमिलापको कुरा गर्ने ?’
भेटका बेला मैले बिपीलाई प्रश्न गरेँ,‘तपाईलाई राजाले उपचारका लागि अमेरिका पठाउने, यहाँ तपाईको होनाहार कार्यकर्ता एवं कमाण्डर क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई फाँसी दिने ? अझै तपाईले मेलमिलापको कुरा गर्ने ?’
यस भेटमा मैले मेलमिलाप नीतिबारे बिपीलाई थुप्रै प्रश्न गरेँ । मेलमिलापको नीति पुष्टि गर्न चुनौती दिएँ । तर, उहाँले मेरो कुरालाई महत्त्व दिनुभएन ।
क्याप्टन थापाको हत्याबारे बिपीले उक्त काम राजाले नभइ उनका वरिपरिका हार्डलाइनरहरुले गरेको भने । त्यसपछि मैले बिपीलाई पुनः प्रश्न गरें, ‘राजासँग शक्ति नै छैन भने के को मेलमिलाप गर्नु पर्‍यो ?’ उहाँले मेरो चित्त बुझ्ने गरी उत्तर दिनुभएन । अन्तिममा पछि बिस्तारमा कुरा गरौँ भन्नुभयो ।
क्याप्टन थापालाई फाँसी दिने र बिपीलाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने अनि नेतृत्वबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि मभित्र कांग्रेस नेतृत्व र नीतिमाथि धेरै प्रश्न उब्जियो ।
क्याप्टन थापालाई फाँसी दिने र बिपीलाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने अनि नेतृत्वबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि मभित्र काग्रेस नेतृत्व र नीतिमाथि धेरै प्रश्न उब्जियो ।
अन्य घटनाक्रम पनि त्यस्तै देखिन थाले । यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगें । कांग्रेसले सामन्तवाद र राजतन्त्रसँग कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्छ भन्ने निष्कर्ष मैले निकालें । पछि घटनाक्रमले त्यो कुरा पुष्टि पनि गर्‍यो ।
कांग्रेसका कारण कम्युनिष्ट बनें
मेरो साहिँला दाइ चीनकाजी श्रेष्ठ नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै अगाडिदेखि लाग्नुभएको थियो । मेरो काइँला बुवाको छोरा कम्युनिष्ट पार्टीबाटै वि.सं. २०१५ सालमा गोरखाबाट चुनाव लड्नुभएको थियो ।
यद्यपि‚ म प्रारम्भमै मार्क्सवादको दर्शन, सिद्धान्त र विचार पढेर वा बुझेर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको होइन । राजनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिकारीबाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन, यसले कुनै न कुनै ठाउँमा राजतन्त्र र सामन्तवादसँग सम्झौता गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति नेपाली कांग्रेस परित्याग गरें ।
राजनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन, यसले कुनै न कुनै ठाउँमा राजतन्त्र र सामन्तवादसँग सम्झौता गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति नेपाली कांग्रेस परित्याग गरें ।
त्यसपछि मैले दर्शन, विचारधाराको अध्ययन गर्न थाले । मेहनतपूर्वक अध्ययन गरें । त्यसपछि मार्क्सवाद नै ठीक, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै ठीक र यसले नै क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें ।
कम्युनिष्ट दर्शनको लामो समयको अध्ययनपछि म निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा चौथो महाधिवेशन (त्यो बेलाको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी)मा सामेल भएँ।
निर्मल लामाको योजनामा शिक्षक
विद्यार्थी र राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाउन मैले बेलाबेलामा जागिर खाएको छु । मलाई निर्मल लामाले सिद्धार्थ वनस्थलीमा शिक्षकको जागिर खान पठाउनुभएको हो ।
सिद्धार्थ वनस्थलीको प्रिन्सिपल लक्ष्मण राजवंशीसँग उहाँको मित्रता थियो । उहाँहरु कम्युनिष्ट पार्टीको साथी हुनुहुन्थ्यो । लामा भूमिगत हुँदा पनि लक्ष्मण राजवंशीसँग सम्पर्क भैराख्थ्यो ।
सिद्धार्थ वनस्थलीको जागिरले दुईवटा काम गर्‍यो । एउटा, पार्टी जीवनलाई अगाडि बढाउन र अर्को स्नातकोत्तरको पढाइलाई अगाडि बढाउन निक्कै सहयोग गर्‍यो ।
अर्को पक्षमा मेरो काठमाडौंको अभावको जीवनमा थोरै भएपनि मद्दत गर्‍यो । मैले पढाउँदा तीन/चार सय रुपैयाँ तलब पाउँथे कि भन्ने लाग्छ ।
सिद्धार्थ वनस्थलीमा पढाउनुभन्दा अगाडि नै मैले अन्य ठाउँमा पनि जागिर खाएको थिएँ । महाराजगञ्ज क्याम्पसमा पढाइ सकेपछि मैले जनमत संग्रह हुनुपूर्व एक वर्षसम्म हेल्थ असिष्टेन्ट (एचए)को जागिर खाएँ ।
थोरै अवधि म नुवाकोट र केही समय गोरखाको आफ्नै गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पनि जागिर खाएँ । मेरो जागिरे जीवनको कुरा गर्दा म पहिले हेल्थ असिष्टेन्ट भएँ ।
थोरै अवधि मैले नुवाकोट र केही समय गोरखाको आफ्नै गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पनि जागिर खाएँ । मेरो जागिरे जीवनको कुरा गर्दा म पहिले हेल्थ असिष्टेन्ट भएँ । केही समय स्कुलमा पढाएँ र पछि सिद्धार्थ वनस्थली कलेजमै पनि केही समय पढाएँ । कलेजमा नेपाल परिचय पढाउँथे । तर, पछि सबै छाडेर राजनीतिमा मात्र केन्द्रित भएँ ।
पत्रकारिताका कारण राजकाज मुद्दा
शिक्षक हुँदा नै मैले पत्रकारिता सुरु गरेको थिएँ । राजनीतिअन्तर्गत नै मेरो पत्रकारिता यात्रा पनि चल्यो । मेरो क्षमता र प्रतिभालाई देखेर पार्टीले नै निर्णय गरेर मलाई पत्रकारितामा पठाएको थियो ।
मैले मूल्याङ्कन पत्रिका प्रकाशन गरें । त्यो बेला गर्जन र जनमत पत्रिकाकोसमेत सम्पादक भएर काम गरें ।
पत्रकार रहेको बेला मैले राजकाज मुद्दा पनि खेपें । धेरै दुःख पायौँ । मेरो टिममा धेरै साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । हामी रातभर काम गर्थ्यौं । मलाई सम्झना छ, महेश मास्के पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नु हुन्थ्यो । महेश मास्के र म एक महिनासम्म चाउचाउ मात्र खाएर बसेका छौँ । त्यसरी हामीले पत्रकारिता गर्‍यौं ।
गिरिराजमणि पोखरेल, विश्वनाथ साह हाम्रा घनिष्ट साथी हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको तरुण साप्ताहिकका सम्पादक परशु घिमिरे पनि मेरो पत्रिकाको स्टाफ हुनुहुन्थ्यो । डा. अच्युत वाग्लेको लेख तपाईले पनि हेर्नु भएको होला, उहाँ पनि हाम्रो पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो ।
घटना र विचारकासम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठी पनि हाम्रो पत्रिकालाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।
गिरिराजमणि पोखरेल, विश्वनाथ साह हाम्रा घनिष्ट साथी हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको तरुण साप्ताहिकका सम्पादक परशु घिमिरे पनि मेरो पत्रिकाको स्टाफ हुनुहुन्थ्यो । डा. अच्युत वाग्लेको लेख तपाईले पनि हेर्नुभएको होला, उहाँ पनि हाम्रो पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो । घटना र विचारकासम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठी पनि हाम्रो पत्रिकालाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेलामा पनि पार्टीले प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी मलाई नै दिएको थियो । पार्टीको तर्फबाट पर्चा निकाल्ने, समाचार सार्वजनिक गर्ने र पत्रिकामार्फत पनि आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मैले धेरै काम गरें ।
अहिले प्रविधिले धेरै फड्को मारेको छ । जसका कारण पत्रकारितामा अहिले सहज भएको छ । पहिले यस्तो सजिलो थिएन । लिडमा टाइप गर्नुपर्थ्यो । अहिले जस्तो अफसेट प्रेस थिएनन् । हामीले अनेक दुःख गरेर पत्रिका निकाल्यौं ।
पत्रकारिता गरेकै कारण राजकाजको मुद्दामा म एक पटक जेल गएको छु । २०३३ साल, २०३६ साल र २०४२/४३ साल गरी म तीन पटक जेल बसेको छु । पार्टीको नीतिअनुसार २०४६ साल पछि म १७/१८ वर्ष भूमिगत र अर्धभूमिगत रहेँ ।
पत्रकारिता गरेकै कारण राजकाजको मुद्दामा म एक पटक जेल गएको छु । समग्र प्रक्रियामा म तीन पटक जेल गएको छु ।
२०३३ साल, २०३६ साल र २०४२/४३ साल गरी म तीन पटक जेल बसेको छु । २०३३ सालको डेढ महिना मात्र जेल बसें । २०३६ मा पनि उस्तै डेढ महिना जति बसें । तर, २०४३ सालमा राजकाज मुद्दामा मलाई छिट्टै नै छाडियो ।
पार्टीको नीतिअनुसार २०४६ साल पछि म १७/१८ वर्ष भूमिगत र अर्धभूमिगत रहेँ ।
(नेता श्रेष्ठको दैनिकी र व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न पक्षमा फरक पाटो-३ मा चर्चा गर्नेछौँ ।)
बाल्यकालमा काँक्रा चोर्दा नराम्रो बदमासी गरेको छु (भिडियोसहित)
सडक खण्डमा मासिक दुई सय दुर्घटना भएपछि लगाइयो यस्तो नियम
बाबुको थरको सट्टा आमाको थर राख्न अदालतको आदेश
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अख्तियारमा मेरो नाममा हालेको उजुरी ‘पत्रु’ हो’
सुखानीका सहिदको स्मृति सभामा नेकपा अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गर्ने
ओली–प्रचण्डले कार्यकर्तामाझ भने, ‘पार्टीमा गम्भीर खालको विवाद छैन’
राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउन पर्यटकीय क्षेत्रको विकास जरुरीः राष्ट्रपति